होसमा रहेसम्म जुम्लामै अनसन बस्ने केसीको अडान - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
होसमा रहेसम्म जुम्लामै अनसन बस्ने केसीको अडान
२८ असार २०७५, बिहीबार २३:२१ July 12, 2018 Nonstop Khabar
जुम्ला, २८ असार । जुम्लामा अनसन बसेका डा. गाेविन्द केसीले अाफू हाेसमा रहँदासम्म जुम्लामै अनसन बस्ने बताएका छन् । केसीलार्इ लिन सरकारले काठमाडाैंबाट नेपाली सेनाकाे हेलिकाेप्टरसहितकाे टिम जुम्ला पठाउन लागेकाे कुरा सुनेपछि डा. केसीले यस्ताे प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
केसीले अाफ्ना माग पूरा नभएसम्म काठमाडौ नफर्किने बताए । उनले भनेका छन, “म होसमा हुन्जेलसम्म र माग सम्बोधन नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा पनि जान्न ।”
साथै केसीले आफूसँग वार्ता गर्न चाहे जुम्लामा आउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राख्दै अनसनरत डा. कसीले सरकारले आफूसँग वार्ता गरिरहनुको कुनै औचित्यसमेत नरहेको बताए । उनले आफूले उठाएका माग नागरिक र विद्यार्थीको पक्षमा भएकाले ती माग सम्बोधन गरे पुग्ने स्पष्ट पारे ।
कांग्रेसले पनि खोल्यो पहिलो खाता, वाम गठबन्धनलार्इ पराजित गर्दै घले विजयी